1-Xaalad walba soo dhawee
aga yaabee dabeesha hadda socota in aysan u roonayn caafimaadkaaga oo ay tahay mid xanuun badan, balse waa in aad maankaaga ku haysaa in ay waqti kooban soconayso oo uusan roobku mar walba da’een.
Wax walba waqti ayey leeyihiin ay bilowdaan waqti ay dhamaadaana waa jirayaa, muhiimadda waa in aad lahaataa adkaysi khibradna uga korosaataa wareegtada xaaladaha ee kusoo asiiba.
Noqo qof adag oo usoo dhawee xaalad walba sida ay kuugu timaado.
3-Nolosh wax walba ka filo
Nolosha wax walba ka filo, wax walbana way kugu samayn kartaa, sida ay rabto ayey cirka iyo dhulkaba kuugu garaaci kartaa, way kusoo dhawayn kartaa hadana waa ku fogayn kartaa, adiga mar walba isku day in aad u taagantahay guusha noloshaada.
Ma ahan in aad noqotaa mid baahidiisa aan u taagnayn ee u taagan baahiyada kale.
Wax ka xun ma jiraan in aad mar walba waqtigaada ku lumiso qof u taagan maarayntii uu kugu maareeyo baahidiisa.
Ilaa aad daaweysid salka cudurka dhibaatada keenay mar walba xanuunka wuu jirayaa.
Waad qarsan kartaa xanuunkaaga ilaa muddo, balse ma ahan mid aad ka carari kartid oo dhibku wuu kula jirayaa ilaa aad salka u qodid raadinta dawadiisa.
6-Wax ka xun ma jiraan
Wax ka xun ma jiraan marka waxa isku kaa haya ay noqdaan waxa ku kala daadiya, maxaa yeelay waxay la mid tahay naftaada oo isla iyada iskala jeexaysa isla iyadana is aruursanaysa waana xanuun runtii.
Awooddaada waad muujin martaa balse taas macnaheeda maahan in aad tahay qof awood leh, mar walba natiijada ka dhalata muujinta awooddaada ayaa ah midda lagu qiimeeyo shaqsiyaddaada haddii aad ahaan lahayd guuleyste iyo guul laawe..
Kan samaqabaha ah ee u baddali kara natiijada xun mid wanaagsan ayaa fahmi kara sharciga lagu kala gaddiyo wanaaga iyo xumaanta, maskaxdiisuna waxay ifisaa Nolosha.
Adiga oo xadkaaga garan karin xawaarahaaga ma koontarooli kartid.
Koontaroolka xawaarahaaga oo lumana wuxuu ka dhigan yahay xadka oo gudubtid, natiijadana waa dhibaato.
Waqti tagay dib uma soo celin kartid
Waaqica oo wajahdaana waa wehesha guushaada.
Walwalkaaga oo yaraadana waa weedh laabtaada u roon.
11-Si dhab ah u eeg
Marka aad si dhab ah y eegto abuurista Eebe ee dunidan wax badan ayaa fahmaysaa, waana markaas marka aad si dhab ah u fakari karto iimaankaagana uu miisaan yeelanayo.
Aamusnaanta ayaa ka khayr roon dhawaqa dhaliisha kuu keeni kara marba waxa aad ka hadlayso haddii aysan ahayn wax dhab ah oo saamayn wanaagsan nolosha u samayn kara.
15-Waa riyada qof kale
17-Haddii lagu yiri
18-Waa nuuca nolosha
Dhulka in aad ku dhacdid sababteeda marnaba ha is waydiin waxa kaliya oo ka fakartaa ha noqdaan sida aad kor ugu kici lahayd busta ku gaartayna aad isaga jafi lahayd socodkana horey ka bilow waa nuuca nolosha ay u sameesantahay.
Qof shalay marka aad liidatay kugu qiimeeyay liidasho maanta ladnaantaada qayb kuma lahan sidaas darteed, mar walba dadka aan duruufaha kaaga harin hareerahaaga ka buuxso.
Saamaynta uu qofku kugu yeesho kuma xirna inta uu qofkaas kula joogo ama aad is taqaaneen, way dhacdaa mararka qaar in qofka aad taqiin uu kaaga saamayn badnaado qof aad taqiin waqti kooban, waa tayada qofka waxa saamaynta yeesha ee aqoonta fog aad u leedahay macna ma samayso.